रियाको जवानी देखेर रिजोइस र सरापे भए लठ्ठ.…. (भिडियो) – Fewa Times
रियाको जवानी देखेर रिजोइस र सरापे भए लठ्ठ.…. (भिडियो)
प्रकाशित मिति: December 2, 2017 8:06 pm
काठमाडौँ – विभिन्न स्टेजहरुमा हट दृश्य प्रस्तुत गर्दै आएकी रिया श्रेष्ठ निकैनै चर्चा बटुल्न सिपालु मानिन्छ। यस्तै दृश्य र हट पर्फोमेंस दिने क्रममा अर्ध नग्न दृस्य दिदै एक म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन। चर्चित कलाकार यादब देवकोटा (सरापे)ले निर्देशन गरेको “फनफनी घुमेर” नामक गीतको भिडियोमा उनले यस्तो दृश्य दिइएकी हुन।
अहिलेका निकैनै ब्यस्त मानिने संगीतकार तथा गायक ओम सुनारको शब्द संगीत तथा स्वर रहेको उक्त भिडियोलाई सुमन कोइरालेले खीचेका हून भने युबराज खत्रीले सम्पादन गरेका छन।
रिजोइस घले गुरुङ्ग ,रिया श्रेष्ठ, यादब देबकोटा, राजू कमेडी, प्रतीक्षा भट्टराई आदिको मुख्य भूमिका रहेको उक्त भिडियो सरापे प्रोडक्शन मार्फत सार्बजनिक गरिएको हो।